Ukuqalisa esetshenziswa ucishe phezu kwamanzi, uqala ukuzibuza indlela yokunqoba umjaho amanzi, okuyinto le njongo ukusebenzisa isikhundla umzimba? Ukuze ufunde ukubhukuda amabanga phezu kwamanzi, zikhona izindlela ezikhethekile zokubhukuda. Omunye wabo - ebhukuda Breaststroke yena uzoqhubeka ke.
izici Jikelele Breaststroke
Brass - inqubo ye- "lazy" umbhukudi, futhi ayivumeli ukuthuthukisa isivinini okwengeziwe ithrekhi. Futhi kungani? Phela, yakhelwe ngekwetinhloso letehlukene ngokuphelele: ukubuyekeza isikhala kwamanzi, kuhlangene ekuqongeleleni amabutho navigation olude. Yilokho kungenxa. Breaststroke, ungaya buthule, nakuba ayengafiki okusheshayo kuqhathaniswa nezinye ezemidlalo ukubhukuda imiklamo.
Futhi lokho kusho Breaststroke ukubhukuda? Isisetshenziswa ukunyakaza phezu kwamanzi endaweni shanela zokuvumelanisa isiyingi we ezandleni nasezinyaweni, lapho imizamo esemqoka ye umbhukudi wenziwa ngaphansi kwamanzi - kuyinto ngethusi.
Ukuvumelanisa ukuhamba imilenze, ku Breaststroke wadala okubizwa ngokuthi amandla iphuzu. Professionals usebenzise lesi sici ezimweni ezahlukene, ezifana wangisiza yokuminza. Le nqubo siyasebenza ngoba diving.
Brass ezemidlalo edluliselwe izinhlanga
abasubathi abaningi, ukuncintisana nomunye at amabanga 100, 200 noma 400 m e amanzi ezemidlalo sihlanganise ukunyakaza elahlukile Breaststroke art. Swimming kule inhlanganisela siqukethe ezinikezwa zesikhathi ukunyakaza: eyodwa ukunyakazisa izingalo, ukuhamba emlenzeni owodwa, kanye okwalandela umoya umoya emanzini.
Lapho umbhukudi ulisebenzisa Breaststroke, qiniseka ukuthi acabangele isikhundla umzimba. Umzimba ngaphezu kwamanzi amanzi, it is waqonda futhi ikhanda lakhe kancane ngihlaliswa amanzi nehlo. Ngesikhathi umzimba ukubhukuda Ungashintsha isikhundla futhi engela umzamo stop.
On kanjani umzimba ibekwe emanzini kuncike inqubo Breaststroke. Kunezindlela ezimbili ukuya ngakho. Okokuqala, lapho izinguquko Zijika komzimba we esitobhini phezu kwamanzi ingeqi degrees 10. Indlela № 2 - imizamo ukugxila ishintshelwa 10-20 degrees.
Swimming Breaststroke phakathi ukuthuthukiswa yezindlela ezimbili unikeza ukusebenza okuhle wezemidlalo. Inketho yokuqala kwandisa ewusizo Dynamics umzimba futhi prodvigaemost yayo jikelele emanzini, yebo, ezinyaweni operation undiza. Eyesibili ivumela ngokulinganayo ukusabalalisa amandla saliphosa ezinyakazayo. Le nhlangano yenkolo yokulwela okwandisiwe izandla phambili umzimba kunyakaza zimbalwa futhi ziyantula.
Indlela efanele zisebenzisa umlenze ukubhukuda Breaststroke
Imilenze kumelwe enze oxosha bese ulandela ukunyakaza, sengathi endiza phezu kwamanzi. Phakathi nokuhamba kwezindikimba imilenze kumelwe ilandelwe isikhawu esincane. Manje ake sibheke ezinye kabanzi ukwesekwa ezinyakazayo.
Ngokwamukela isikhundla umzimba yokuqala, umbhukudi ubabonisa imilenze yakhe, ulethe eduze nomunye wabo. Amasokisi kufanele kancane babanjwa. Khona-ke udinga ngokushelela agobe amadolo nezinqulu kufanele lugcinwe kwamanzi. Thatha ukunyakaza ngesikhathi esisodwa ngamadolo, aziphonse kuse ecaleni futhi kancane phansi, umzimba lizoqala ukwehla kancane ngaphansi kwamanzi. Eqhubeka ukunyakaza, usizakale izinyawo ekufezeni isiqu. Kungakuhle ebhukuda umzimba Breaststroke Nyakazisa maqondana kunawo wonke ngaleso 130-140 degrees. Drumstick maqondana kunawo wonke cishe mpo, lapho ephuma ngezinyawo emanzini.
Ungakhohlwa ukuthi ngesikhathi ngasinye okwalandela umlenze ukunyakaza kuyodingeka ukudonsa kuya hip, futhi idala i ezengeziwe kwemisipha uhlobo. Ukwazi lokhu, uzame ukuwuphula bese uyaqondisa imilenze akasheshi, mayelana ngesilinganiso.
Uma unbend imilenze, eqondisa ukunyakaza kufanele kube nilumana futhi kancane yashesha (kuqala ukunyakaza isigaba). izinyawo ngesikhathi esifanayo, "itshe" emuva. Lapho imilenze uqale Ehlala, Arch endaweni ethile phakathi umzimba (isigaba se-ukunyakaza yesibili). Umsebenzi oyinhloko owenziwayo kwenziwa emlenzeni ngezinyawo, ukuthuthukisa uyilokho okudingekayo ukuze ibenze umzimba.